Heretika sy Hexen: Ahoana ny filalaovana kilalao "sekoly taloha" amin'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Heretika sy Hexen: Ahoana ny filalaovana kilalao "Old School" amin'ny GNU / Linux?
Averina indray, anio dia hiditra ny «World gamer» indrindra ny lalao karazana "Sekoly taloha" tena tia an'izay efa zokinjokiny isika, saingy nihalehibe niaraka nilalao tamin'izy ireo izahay, ary ny tanora sasany izay tia «Lalao Retro». Noho izany, androany ny anjarany dia indrindra ho an'ny Lalao toy ny Heretika sy Hexen.
"Loza, heretika ary hexen" dia ampahany amin'ny lisitra lava an'ny lalao toy ny "Old School", izay mitondra fahaverezam-po sy fahatsiarovana mahafinaritra be dia be ho anay. Ary afaka manaraka isika milalao ao amin'ny GNU / Linux amin'ny alàlan'ny programa anatiny na fonosana misy ao amin'ny trano fitehirizana toa ny "Loza sôkôla", na toy ny ivelany "Miorina Doomsday".
Alohan'ny hidiranao amin'ny lohahevitra feno ny fomba filalaovana amin'ny GNU / Linux lalao toa "Loza, heretika ary hexen" ny alalan ' "Loza sôkôla" y "Miorina Doomsday", dia hamela avy hatrany lisitra kely iray an'ny Lahatsoratra mifandraika Manoro hevitra izahay hizaha, hanitatra ny fahafahan'ny lalao an'ity karazana ity eo aminay Distros:
"GZDoom dia iray amin'ireo Seranan-tsambo 3 an'ny ZDoom ankehitriny, izay fianakaviana manana seranan-tsambo nohatsaraina ho an'ny Doom Engine ho famonoana ireo Operating Systems maoderina. Ireo Ports ireo dia miasa amin'ny Windows, Linux, ary OS X maoderina, manampy endri-javatra vaovao tsy hita amin'ny lalao navoakan'ny Id Software tamin'ny voalohany. Ny seranana ZDoom taloha dia azo ampiasaina sy zaraina maimaimpoana." Fahamarana: Ahoana no filalaovana Doom sy lalao FPS hafa mitovy amin'ny GZDoom?
EDuke32: Ahoana ny fametrahana sy filalaovana Duke Nukem 3D amin'ny GNU / Linux?
1 Doom, Heretika ary Hexen miaraka amin'ny Doomsday Engine sy Chocolate Doom
1.1 Inona ireo lalao Doom, Heretika ary Hexen?
1.2 Fangatahana mihazakazaka lalao kilasy Old School
1.2.1 Momba ny Doomsday
1.2.2 Sôkôla Doom
Doom, Heretika ary Hexen amin'ny Doomsday Engine ary Chocolate Doom
Inona ireo lalao Doom, Heretika ary Hexen?
Ho an'ireo mety tsy mahalala na tsy mahatadidy izay nolazaina azy lalao taloha, hanolotra famerenana kely izahay, hametrahana ny tenantsika amin'ny sahan-kevitra:
"Doom dia lalao video noforonin'i Id Software tamin'ny taona 1993. Ny Doom tany am-boalohany dia nihazakazaka teo ambanin'ny rafitry ny DOS. Ary ny lalao dia misy fisandohana tahaka ny ranomasina an-habakabaka izay matetika ao amin'ny gara ao Phobos, iray amin'ny volana ao Mars. Ao anatin'ny iray segondra, misokatra ny vavahadin'ny helo, manafaka demonia maro, fanahy maloto, zombie, izay mameno ny fotony ao anatin'ny ora maromaro. Ny toetra amam-panahy irery ihany no olona velona ao amin'ny gara ary ny iraka dia ny hahatonga azy io ho velona hatrany amin'ny ambaratonga ka hatrany amin'ny ambaratonga (toy ny amin'ny Wolfenstein 3D)." Fahamelezana ao amin'ny Doom wiki fandom
"Heretic (Heretic amin'ny teny Anglisy) dia lalao nofinofy sy hetsika mahomby, nalefan'ny Raven Software tamin'ny 23 Desambra 1994, vokatry ny fiarahany faharoa tamin'ny id Software aorian'ny Shadowcaster. Miorina amin'ny motera Doom novaina, i Heretic dia nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fampidirana ny rafitry ny tahiry entana hampiasaina amin'ny fotoana tena izy, ary nanjary lasa mahazatra amin'ny karazana FPS. Id Software dia namoaka ny lalao teo ambanin'ny marika nomen'izy ireo." Heretika amin'ny fandokoana Doom Wiki
"Hexen: Beyond Heretic (na Hexen tsotra) dia horonantsary horonantsary FPS (First Person Shooter) navoakan'ny Raven Software, navoakan'ny id Software ary nozarain'i Warner. Navoaka tamin'ny 30 Oktobra 1995. Azo porofoina fa ny tohin'ny Heretic, satria mizara an'izao rehetra izao sy singa sasany amin'ilay tantara izy ireo, na dia amina tontolo hafa aza." Hexen amin'ny fandokoana Doom Wiki
Fangatahana mihazakazaka lalao kilasy Old School
Manatanteraka lalao toy ny "Old School" amin'ny GNU / Linux manana safidy maromaro isika, ny sasany efa fantatra amin'ny hoe GZDoom, ary ny hafa mbola tsy nitady toa an PrBoom. Raha amin'ity indray mitoraka ity dia hijery 2 hafa isika, dia:
Olona ny Fara Andro Engine
Araka ny anao tranokala ofisialy, "Miorina Doomsday" faritana fohifohy hoe:
"Seranan-tsambo Doom, Heretic ary Hexen miaraka amin'ny sary nohatsaraina."
Ho an'ny misintona, mametraka ary mampiasa mila misintona ny anao fotsiny izahay installer fisie amin'ny endrika .deb avy amin'ny Fizarana misintona ho an'ny GNU / Linux. Avy eo apetaho mora foana amin'ny alàlan'ny interface CLI na GUI, amin'ny fampiasana fomba sy programa malaza. Raha vao mihazakazaka azy, aleo amin'ny alàlan'ny menio fampiharana. Raha vantany vao novonoina sy natomboka dia tsy hanondro izay nampiantranoanay azy fotsiny izahay .wad na fisie .pk3 ny lalao mifototra amin'ny Fahamelezana, heretika ary hexen, alaina taloha na azo amin'ny fomba rehetra.
Para fanazavana fanampiny amin'ny "Miorina Doomsday" afaka mitsidika ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub.
Araka ny anao tranokala ofisialy, "Loza sôkôla" faritana fohifohy hoe:
"Seranan-tsambo Doom izay mamerina am-pahatokiana ny traikefa Doom, araka izay nilalaovana tamin'ny taona 90. "
Ho an'ny misintona, mametraka ary mampiasa azonao atao ny misintona ny rakitra loharano amin'ny endrika .tar.gz avy amin'ny Fizarana fampidinana. Saingy, amin'ny tranga misy anay dia nametraka azy io tamin'ny alàlan'ny terminal (console) izahay, araka ny tolo-kevitrareo Fizarana fametrahana ao amin'ny GNU / Linux.
Hatramin'izay, ny mahazatra antsika Mamerina Linux antsoina hoe Fahagagana GNU / Linux, izay miorina amin'ny MX Linux 19 (Debian 10), ary izany dia natsangana taorian'ny ny «Torolàlana Snapshot MX Linux» nampidiriny tao amin'ny fitoerany izany.
Raha vantany vao apetraka dia tokony hatao amin'ny alàlan'ny terminal fotsiny izay manondro ny toerana nampiantranoantsika azy .wad fisie ny lalao mifototra amin'ny Fahamelezana, heretika ary hexen, alaina taloha na azo amin'ny fomba rehetra.
Para fanazavana fanampiny amin'ny "Loza sôkôla" afaka mitsidika ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub.
Raha fintinina dia afaka manamarina isika mandraka ankehitriny fa, mbola maro amin'ireo kilalao nostalgic sy mahafinaritra «Old School» karazana lalao, ahoana "Loza, heretika ary hexen", ankoatry ny maro hafa, mijanona misy ary azo lalaovina fa tsy amin'ny Windows, fa koa amin'ny ankehitriny Rafitra miasa malalaka sy malalaka, ahoana GNU / Linux. Ary tsy amin'ny programa anatiny na fonosana hita ao amin'ny trano fitehirizana toa "Loza sôkôla", fa ivelany toy ny "Miorina Doomsday".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Heretika sy Hexen: Ahoana ny filalaovana kilalao "Old School" amin'ny GNU / Linux?
Apprepo: tranokala tranokala iray hafa misintona fampiharana amin'ny endrika AppImage
Musique: mpilalao mozika nohavaozina sy hafa ho an'ny GNU / Linux